Raw Cetilistat (Oblean) powder (282526-98-1) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Cetilistat (Oblean) upfu
Rating: SKU: 282526-98-1. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika pakukura kweCetilistat (Oblean) powder (282526-98-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Name: Cetilistat (Oblean) powder
Cetilistat (Oblean) powder cycle
Makemikari Mazita: Cetilistat powder
Mazita emagetsi: Oblean powder
Cetilistat (Oblean) Kushandisa Poda
Cetilistat (Oblean) powder inhibitor ye pancreatic lipase, enzyme inoputsa triglycerides mumukumbo. Pasina iyi enzyme, triglycerides kubva kuzvokudya inodziviswa kuti irege kushandiswa kwehydrilyzedzwa kuti iwane yakawanda yemafuta asidi uye inosara kuti ive yakanyanyiswa isina kupfuura. Ichi chemishonga, iyo yakafanana neyozvino yava FDA-inogamuchirwa mishonga kanalist, iyo inogona kunge yakanyatsokonzerwa nehuwandu-hunobudirira hunoita nekuda kwechimiro chakasiyana chemasero. Chikamu che 2 chiitiko chakadzidza 612 zvakanyanya, chirwere cheshuga chinotarisana neBMI ye28 kusvika ku45 kg / m2 pamusoro pekushongedzwa kwevhiki kwe12. Cetilistat powder 80 uye 120 mg yakasimudza kukosha kwekureruka kwakaenzana nekuenzaniswa ne placebo (3.85 kg uye 4.32 kg vs. 2.86 kg, zvichienderana). Pfupfu yakasvibiswa-iyo inokonzerwa nekurasikirwa kwekurema yakafanana nekurasikirwa kwemahombeksi yakawanikwa ne orlistat powder (3.78 kg). Cetilistat powder yakanga yakanyatsoritswa uye yakaratidza kuderera kwekuregererwa nekuda kwezviitiko zvinotambudza kupfuura mu placebo uye orlistat powder groups. Zvichipa kuti discontinuation muboka ye-orlistat yehupfu yakanyanya kuipa kudarika mumiriri we 120 mg Oblean powder uye mapoka e placebo, uye yakanga yakakwana nekuda kwezviitiko zvinokonzera mimba, Cetilistat powder inogona kunge yakagadzirwa lipase inhibitor yekuwana kurasikirwa kwemazi. Phase 3 miedzo yeOblean powder ikozvino iri kuitika muJapan.
Ndechipi chiyero chePuonde yeOblean
Nhengo yehupfu yeupfu inopiwa se60mg simba capsules yekutungamirira nomuromo. Mushonga wacho unotorwa nechingwa kuti uve nechokwadi chokuti unogona kushanda panguva iyo zvokudya zviri kugadzirwa, kuitira kuti kunwa kwemafuta kubva muzvokudya kunogona kuderedzwa zvakanaka. Chiremba wako achakupa mazano pamusoro pekurapa kwemishonga yakawanda sei neyero imwe neimwe, se wellas iyo inoda zuva rega rega. Zvakakosha kuti iwe unamate kune mirairo iyi. Usatora zvinopfuura chiremba wako anokuudza kuti utore.
Izvozvo zvinoshandisa sei pfupa mabasa
Cetilistat powder inorema kurasikirwa powder inoshandiswa pamwe chete nechepasi koriki yezvokudya. Inoshanda nekuvhara huwandu hwakawandisa hwemafuta kubva pakugadzirwa uye kupinda mumuviri. Iyi kurasikirwa kweupfu inoshandiswa se lipase inhibitor uye inoshanda zvakananga pamagetsi ekugadzirisa iyo inodzivisa chiito che lipolytic enzyme inonzi lipase. Izvi zvinoshandiswa nemuviri kunosvina mafuta. Zvisinei, apo mishonga iyi inotarisirwa pamwe chete nekudya, inosunga kumapuropa, nekudaro ichivadzivisa kubva pakaputsa mafuta. Mafuta asingashandisi hydrolyzed asi anonyoreswa mucheka, zvichiita kuti kuwedzerwa mafecal fat excretion uye kuderedzwa kwemafuta. Kana yakashandiswa pamwe chete nekodori yakadyiwa kudya, inogona kubatsira kuderedza kuora muviri uye kuita kuti zvive nyore kune vakwegura vanorema kuti vadzoke zvakare muhumwe, nokudaro vachiwedzera mikana yekubudirira kuora muviri. Kushandisa kwayo nzira yakafanana nehukuru hweanlistat yeupfu nekudzivisa pancreatic lipase.
Hazvikurudzirwi kutora zvinopfuura 3 capsules mukati maawa 24.
Nenguva isipi pfuurira kune dhipatimendi rako rinotarisana nedambudziko kana iwe uchitambura nemagetsi. Zviratidzo zvinowanzobatanidzwa nekuita kwakadai zvinosanganisira kuoma kufema kana kumedza, chifu chechisimba, kuvhara, ganda remaputi, uye mikoko.
Cetislim haisi nguva dzose yakakodzera kune vose varwere. Nguva dzose rongororai mutano wako wehutano usati watanga mushonga uyu kana iwe uri nepamuviri, uchiyamwisa, uchiedza kubata pamuviri, uchishandisa chero mimwe mishonga (mishonga kana kuti isiri mishonga), uchishandisa chero mishonga yemishonga kana zvimwe zvinowedzera, kana uine chero mishonga yemakumbo kana imwe hutano zvinetso.
Nhamba yakakwana yehupfu yeOblean nemishonga inowanzoenderana nemurwere uye mamiriro ekurapa. Usagadzirisa muyero wako usina kubvumirwa nemupi wehutano wako. Ichi chigadzirwa ndechekushandiswa sezvakanyorwa uye zvinorayirwa.
Ko Cetilistat (Oblean) powdine Iva Nezvimwe Zvikamu Zvimwe
Varwere vari kuitirwa kurapwa kwekuninipiswa neIyiislim powder vanogona kutambura nemigumisiro. Iwe unofanira kuzivisa chiremba wako kana izvi zvichiitika. Mimwe mienzaniso inopiwa apa:
Nzira yekutenga Odean powder: kutenga Cetilistat powder kubva kuAASraw